आज काठमाडौं उपत्यकामा ४२ जना संक्रमित थपिए | Kendrabindu Nepal Online News
२६ असार २०७७, शुक्रबार १७:२५
आज मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ४२ जना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा २८, ललितपुरमा १३ र भक्तपुरमा १ जनामा संक्रमण देखिएको हो । आजसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए ।
शुक्रबार पीसीआर विधिबाट ४ हजार ८ सय ६ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ । आजसम्म २ लाख ७५ हजार ९ सय ५१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । देशभरीका क्वारेन्टाइनमा २३ हजार ९ सय १० जना रहेका छन् ।
विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा ८ हजार ६ सय ३ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । शुक्रबार १ सय २० जना गरी आजसम्म ८ हजार ११ जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अब हामी ३० वर्ष पछाडि फर्किने कि अगाडि बढ्ने ? (भिडियो रिपोर्ट)
Prev‘लकडाउनले मलाई आध्यात्मिक बनायो’ : गायिका इन्दिरा जोशी (भिडियोसहित)
नेकपा विवादको सजायँ जनतालाई किन ? (भिडियो रिपोर्ट)Next